Ama-aerosol asithinta kanjani isimo sezulu somhlaba wonke? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ama-aerosol asithinta kanjani isimo sezulu somhlaba wonke?
Osukwini lwethu nosuku sisebenzisa imikhiqizo eyenza impilo ibe ntofontofo; noma kunjalo, ezinye zazo ziyingozi kakhulu, kithina nakwezemvelo, njengoba kunjalo ngama-aerosols.
Yize kungamangalisa, ngenxa yentaba-mlilo yase-Iceland esingayazi ama-aerosols asithinta kanjani isimo sezulu somhlaba jikelele.
Le yintaba-mlilo ethakazelisa kakhulu ukwazi ukuthi ama-aerosol athinta kanjani, ngoba phakathi konyaka we-1783 nowe-1784, ukuqhekeka kweLaki kwentaba-mlilo iHoluhraun kwakukhipha isulfure dioxide izinyanga eziyisishiyagalombili, kwadala ikholomu enkulu yezinhlayiya eNyakatho ye-Atlantic. Lezi zifutho zemvelo kunciphise ubukhulu bamaconsi emafu, kodwa abazange baphakamise inani lamanzi abakuwo njengoba kwatholakala ithimba lososayensi eliholwa yi-University of Exeter (United Kingdom).
Ngale ndlela, abacwaningi bakholelwa ukuthi imiphumela yabo, eshicilelwe esifundweni kumagazini 'Nature' kunganciphisa ukungaqiniseki ekuqageleni kwesimo sezulu esizayo echaza umthelela ama-sulphate aerosols angena kuwo avela embonini yezimboni ekuguqukeni kwesimo sezulu.
Ama-Aerosols zisebenza njenge-nuclei lapho umhwamuko wamanzi osemkhathini ujiya khona ukwakha amafu. Ngenkathi kunama-aerosol asezimbonini, kuneminye imithombo yemvelo njengokukhishwa kwesulfure dioxide ngenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo.
Ngesikhathi kuqhuma intaba-mlilo iHoluhraun okokugcina, okwenzeka ngo-2014-2015, yakhipha phakathi kwamathani angama-40.000 kuya ku-100.000 XNUMX esulphur dioxide nsuku zonke phakathi nesikhathi sokuqhuma kwayo. Ochwepheshe basebenzise amamodeli wesimo sezulu esesimweni esithe, kuhlangene nemininingwane etholwe kuma-satellite e-NASA, bakwazi ukuthola ukuthi ubukhulu bamaconsi amanzi bancipha ngosayizi, okwaholela engxenyeni enkulu yelanga kuboniswe emuva esikhaleni. Ukuze, izulu labanda.
Ngakho-ke, abacwaningi bakholelwa ukuthi izinhlelo zamafu "zivikelwe kahle" ekushintsheni kwe-aerosol emkhathini.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ama-aerosol asithinta kanjani isimo sezulu somhlaba wonke?
IGreenpeace ipenda iLanga elikhulu eBarcelona ukuxhasa ukuvuselelwa